In Bilbao Ay Halis Tahay, Dareenkiisa Ku Aadista Roma Ee CL & Shirka Jaraa’id Ee Valverde Ka Hor Kulanka Beri %
Tababaraha kooxda kubada cagta Barcelona ninka lagu magacaabo Ernesto Valverde oo warbaahinta uwaramayey ka hor kulanka ay La Liga kula balansan yihiin dhigooda Athletic Bilbao, ayaa wuxuu cadeeyay in naadigaan ay tahay mid aad halis u ah.
Kulanka labadaan kooxood, kaasoo ka tirsan horyaalka labaad ee dunida ugu xiisaha badan, ee ayaa waxaa uu ka dhici doonaa garoonka camaaliqada horyaalka wadanka Spain, kaasoo lagu magacaabo Camp Nou, islamarkaana ku yaala Gobolka Catalonia.
Ciyaartaan oo hadii uu ALLE raali ka noqdo warbixinadeeda aad kala socon doonto Shabakada wararka cayaaraha ee Laacib.so ayaa waxaa laga daawan doonaa marka ay saacadda Geeska Afrika ama Qaaradda Afrika soo dul istaagto 18:15 oo Maqribnimo.
“Athletic, mar walba waa kuwa halis ah, waxayna yihiin kuwa dhibaato badan abuuri kara inta uu kulanka socdo, maxaa yeelay waxay yihiin kuwa haysta ama leh Isbiirad badan oo fiican,” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Valverde.
“Muhiimadu waa inaan guuleysano kulankaan, maxaa yeelay kadib waxaa la aadayaa ciyaaraha caaalmiga ah ee saaxiibtinada sidaa darteeda, waxaan dooneynaa inaan guul kusoo xirno,” ayuu hadalkiisa ku daray hogaamiyaha Bluagrana.
“Waa uu ogyahay qof walba in kulankaan uu yahay mid aad u adag, waxana rabnaa inaan xisaabtano mudada aan garoonka ku jirno, maxaa yeelay bisha April, waxaan geli doonaa Jadwal ciyaareed aad u adag,” ayuu raaciyay.
Mar la su’aalay waxa ay uga dhigan tahay in markii labaad uu ka hor yimaado kooxdii uu horey macalinka ugu soo ahaa ayuu ku jawaabay: “Waxay mar walba ii tahay mid qaas ah, waxaana aniga ahaan aan u arkaa sharaf weyn maxaa yeelay wax fiican ayaan usoo sameeyay.
Dhanka Kale, Valverde oo si kooban uga hadlay in kooxdiisa ay ku aado wareega Sideed dhamaadka tartanka Champions League dhigeeda AS Roma, ayaa wuxuu yiri: “Roma, waa koox leh taariikh wanaagsan, waxaase ka horeeya kulamo badan oo muhiim.
“Hada, waxaan ka fikireyno ayaa ah inaan guuleysano kulanka [aan ka hor-jeegno Athletic] isaga ayaana diirada saareynaa, waxaana ka hadli doonaa kan Roma marka aan gaarno,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Valverde.
Barcelona vs Athletic BilbaoLa Liga